DEG DEG: DF oo ogolaatay in wax laga beddelo guddiga doorashada iyo liis laga sugayo mucaaradka - Banaadisom
Home Wararka Maanta DEG DEG: DF oo ogolaatay in wax laga beddelo guddiga doorashada iyo...
DEG DEG: DF oo ogolaatay in wax laga beddelo guddiga doorashada iyo liis laga sugayo mucaaradka
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Allbanaadir Media u sheegay in dowladda federaalka ay ugu dambeyn ogolaatay in wax laga beddelo guddiga lagu muransan yahay ee doorashada, taasi oo caqabad ku noqotay in dalka ay ka dhacdo doorasho.
Guddigan ayaa waxaa diiday qaar ka mid ah madax goboleedyada iyo mucaaradka dalka, ayaga oo sheegay inay ku jiraan shaqaale dowladeed iyo saraakiil ciidan, gaar ahaan kuwa ka mid ah sirdoonka.
Xog aan helnay ayaa sheegeysa in si caqabadda taagan looga gudbo ay dowladda ogolaatay in mucaaradka ay soo gudbiyaan magacyada xubnaha ku jira guddiga ee ay doonayaan in la beddelo.
DEG DEG Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo shacabka ka dalbaday arin ku cusub ololaha doorashada Soomaaliya(Opens in a new browser tab)
Dowladda ayaa mucaaradka u qabatay inay saddex cisho kusoo gudbiyaan liiskan, waxaana ay ku eg tahay caawa, sida aan xogta ku helnay.
Mucaaradka ayaan weli gudbin liiskaas, mana cadda inay kusoo gudbin doonaan iwaqtiga ka harsan. Waxaan sidoo kale xitaa la ogeyn haddii la beddelo xubnaha ay doonayaan cidda lagu beddeli doono, taasi oo ay shaki weyn ka qabaan.
Xubno ka tirsan mucaaradka ayaa Allbanaadir Media u sheegay inay tani u arkaan cayaar siyaasadeed cusub oo dowladda ay waddo.
Maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa sare u kacay dadaallo ay wadaan qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada, si xal looga gaaro muranka doorashada.
Dowladda federaalka ayaa waxaa kasii dhammaanaya muddo xileedka. Baarlamanka ayaa muddo xileedkiisa ku ekaaa 27-kii December, waxaana madaxweynaha u haray kaliya hal bil, ayada oo waqtigiisa uu ku egyahay 7-da Febraayo 2021.
Previous articleAl-Shabaab iyo shacab uu dhex-maray dagaal culus
Next articleXasan Sheekh oo shaaciyay saddex qodob oo sabab u ah khilaafka doorashada & Hal Arin oo sheegay